Inkqubo yeBathathi-nkulu: I-Power is Amassed kwiCongress
Amagunya anikwa njani kwiCongress
Igama elithi "inkqubo yokuguga" lisetyenziselwa ukuchaza umkhuba wokunikezela ngeemfuno ezikhethekileyo kunye namalungelo kumalungu eSenate yase - US kunye neNdlu yabameli abaye bakhonza ixesha elide. Inkqubo yesigxina sele ijoliswe kumanyathelo amaninzi okuhlaziywa kwiminyaka, yonke into ayiphumelelanga ukuthintela amalungu amaninzi aseCongress ukuba agqibe amandla amakhulu.
Amalungelo eLungu eliPhezulu
Amalungu aphakamileyo avunyelwe ukukhetha iiofisi zabo kunye nezabelo zekomiti.
Eli lokugqibela linye lamalungelo abaluleke kakhulu ilungu leNgqungquthela inokufumana ngenxa yeekomiti apho apho ininzi yomsebenzi obalulekileyo wemithetho eyenzekayo , kungekhona kumgangatho weNdlu kunye neSeti.
Amalungu anethuba elide leenkonzo kwikomiti nabo bacinga ukuba baphezulu, ngoko ke banamandla amaninzi ngaphakathi kwikomiti. Isikhundla sisoloko siqhelekileyo, kodwa asikho ngaso sonke isikhathi, sicinga xa iqela ngalinye liwonga i-committee-chairships, isikhundla esiphezulu kwikomiti.
Imbali yeNkqubo yeMatriki
Inkqubo yesigxina kwiCongress ibuyele ngo-1911 kunye nokuvukela kwiNdlu uSomlomo uJoseph Cannon, ubhale uRobert E. Dewhirst kwi-Encyclopedia yaseUnited States Congress. Inkqubo yeentlobo zezikhundla yayisele ikhona, kodwa iCannon yayisebenzisa amandla amakhulu, ilawula yonke into elawulwayo eyayilwayo kwiNdlu.
Ukuququzelela ukulungelelaniswa kokulungiswa kwamanye amaRiphabhliki angama-42, ummeli waseNebraska uGeorge Norris usungulwe isisombululo esiya kususa uSomlomo kwiKomidi YeeMithetho, ngokuyimpumelelo ngokumhlupha onke amandla.
Xa sele sele yamkelwe, inkqubo yobudala ivumele amalungu eNdlu ukuba aqhubele phambili aze athole izabelo zekomiti nangona ubunkokeli beqela labo bechasene nabo.
Iziphumo zeNkqubo yeMatriki
Amalungu eKongameli abathanda inkqubo yexesha elidala kuba kubonakala njengendlela engabonakaliyo yokukhetha abaphathi beekomidi, ngokuchasene nenkqubo eqeshe imisebenzi, ukunyanzelisa, nokuthanda.
"Akukhona ukuba iCongress ithanda ukuphakama ngaphezulu," ilungu laseNdiya elivela eArizona, uStewart Udall, lathi, "kodwa izinto ezingekho ngaphantsi."
Inkqubo yesigqeba iphakamisa igunya lezitulo zekomiti (elingaphelelanga kwiminyaka emithandathu ukusuka ngo-1995) kuba ayiboni kwakhona kwiminqweno yeenkokeli zeqela. Ngenxa yobume bemimiselo ye-ofisi, ukuphakama kubaluleke kakhulu kwi-Senate (apho imimiselo iyiminyaka emithandathu), kuneNdlu yabameli (apho imigangatho yimizuzu emibini kuphela).
Ezinye zezona zikhundla zobukhokheli ezinamandla kakhulu-isithethi seNdlu kunye neenkokheli ezininzi-zikhethwa zikhundla kwaye ngoko-ke zithintela ukulwa nomzimba.
Umphathi uphinde ubhekise ekumaweni komthetho wee-legislator eWashington, DC Xa ilungu liye lakhonza, lilungele indawo yakhe yeefisi kwaye mhlawumbi uya kumenywa kumaqela abalulekileyo kunye namanye amanyano. Ekubeni akukho mida yelungu lamalungu eCongress , oku kuthetha ukuba amalungu kunye nobukhulu bangakwazi, kwaye banako ukuhlanganisa amaninzi amakhulu yamandla kunye nempembelelo.
Ukugxeka kweNkqubo yeMatriki
Abachasene nenkqubo yokubaluleka kwiCongress bathi inika ithuba kubaphathi-mthetho abavela kwiindawo ezibizwa ngokuthi "ezikhuselekileyo" (apho abavoti bexhasa kakhulu iqela elinye lezopolitiko okanye elinye) kwaye akuqinisekisi ukuba umntu ofanelekileyo kakhulu uya kuba ngusihlalo.
Konke kuya kuthathelwa ukuphelisa inkqubo ye-seniority Senate, umzekelo, ininzi yesonto elilula ukulungisa iMigaqo yalo. Emva koko, amathuba okuba naliphi ilungu leCongress lokuvota lokunciphisa lakhe lingenanto.
Imfazwe yaseFransi neyamaNdiya: Ukuvinjwa kweFil William Henry